DAAWO Soomaaliya oo Laga Digey Afganbi Military oo yaab leh Xili Afrika Wajahayso Afganbigii ugu Xumaa - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO Soomaaliya oo Laga Digey Afganbi Military oo yaab leh Xili Afrika Wajahayso Afganbigii ugu Xumaa
September 22, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 3
Dimuqraadiyadda Afrika ayaa mar kale qallafsan. iskudayga inqilaabkii ugu Danbeeyey Ayaa ka Dhacay dalka Suudaan,waana Xili Qaarada Afrika wajahayso Afganbiyadii ugu Xumaa taarikhda Casriga Ah,Taasi oo Ay Weheliso Xiisadaha Gudaha Afrika oo Sii Xoogaysanaya Waxaa Dheer In Koxaha argagaxisada Ay Hada Xarun ka Dhigteen Afrika.
Soomaaliya Ayaa aad loogu Xusay Warbixintani Inay u Nugushahay Afganbi Xili Buuq Siyaasadeed uu Jiro,Marka laga tago Afganbi Siyaasadeed Waxaa Soomaaliya Khatar ugu Jirtaa Duulaan Kooxaha Dagaalamayaasha oo Dowlada Lagu Afganbinayo.
Sidoo kale Soomaaliya Ayaa la sheegay inay ka Mid Tahay Meelaha ay kasoo Baxayeen Hanaan Dimuraadiyad ah si ka Duwan Dalal badan oo Afrika Ah,waxay soomaaliya Ku wanagsan tahay Aqbalida Guuldarada Doorashooyinka Inkasta oo Aysan Gaadhin Doorashada heer dadku Doortaan.
Inqilaabkii milatari ee bishan ka dhacay Guinea, oo ay weheliyaan laba afgembi oo dhawaan ka dhacay dalka dariska la ah Mali, iyo awood ku qabsashada Chad, xidhitaankii baarlamaanka Tunisia iyo guul -darradii soo noqnoqotay ee ahayd in doorasho waqtigeeda ku qabsoonto Soomaaliya ,Waxani oo dhan waxay soo jeedinayaan in Afganbigu ay mar kale ku soo kordhayso Afrika dhawr iyo toban sano ka dib markii codbixiyeyaashu ay sare u kaceen.
Intaa waxaa dheer, jihaadnimadu waxay halis ku tahay xasilloonida iyo doorashada dimoqraadiyadda ee inta badan Afrika. Mali, Niger iyo Burkina Faso, oo ah halka si nabdoon loogu raadinayo horumarinta siyaasadda iyo dhaqaalaha dhawaanahanba , waxaa maalin walba soo weerara maleeshiyaad daacadda u ah Dawladda Islaamiga ah ee Galbeedka Afrika iyo al-Qaacidada Maqribul Islaam. Gobolkan (oo ka kooban inta badan gobolka Saaxil oo koonfur ka xiga Sahara), ayaa hadda beddelay Ciraaq iyo Afgaanistaan ​​oo ah xarunta ugu weyn caalamka ee Dawladda Islaamiga iyo xagjirnimada al-Qaacida. Ka bixitaanka degdegga ah ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee xulufada la ah Afghanistan waxaa hubaal ah inay sii laba jibaari doonaan cadaadiska ay Islaamiyiintan ku hayaan dimuqraadiyadda Afrika.
Itoobiya waxaa ka socda dagaalkii ugu Xumaa oo muujinaya walaaca TPLF Inay samayn karaan Afganbi Dowlada faderalka ka Dhan ah,waxayna Khatar ku tahay dalalka Dariska La ah.
Laba kacdoon oo kale oo Afrikaan ah ayaa sidoo kale ka faa’iideysanaya dhimista awoodda reer Galbeedka ee Afgaanistaan. Kacdoonkii dheeraa ee al-Shabaab ka waday Soomaaliya ayaa ka dhigay dowlad-dhisidda Geeska Afrika mid aan macquul ahayn. Hadda, waxaa jira al-Shabaab-Ansar al-Sunna-oo rabshado ka hurineysa waqooyiga Mozambique.
Qudbad Madaxweyne Farmaajo Ka Jeediyey Shirka Golaha QM Dhinacyo badan uu Uga Hadlay
XOGTA Erdogan oo Book Dastuurka Cadaalada Aduunka Lagu Xukumi Doono geeyey QM ,iiyo Ka jirta Islamka iyo Afrika.
Dawlad kasta oo igmashadeeda gabta ee dalkeeda iyo dadkeedana dayacda dan baa loo inqilaabayaa oo taasu abid ayay dhici jirtay. Ma aha cabsi ugub ah oo hadda Afrika soo waajahday.
Marka ay Soomaaliya noqotona, dawlad in la inqilaabo u qalanta oo la buunbuuniyo meeshaba kamajirto, waayo dawlad rasmi ah xataa dalkan kama shaqeyso. Qawsaarro aan igmasho, idam, iyo sharciyad dastuuri ah kujoogin ayaa Xamar isku dhex eryanaya, halka dalka intiisa kalena ay ka jiraan dawlado maxalli ah oo sugan ee dadkii lahaana ay gacan bir ah kuhayaan.
Inta nacasnimada iyo maalaayacniga laga baxo, dawlad goboleedyadu dowrkooda aasaasiga ah ha ciyaareen oo wixii doorasho ah degaannadooda ha kahirgeliyeen oo ka dhaqangeliyeen marka hore, labo sano kaddibna doorashada madaxweynaha qaranka qaab federaali ah haloo qorsheysto oo loona fuliyo.
Doorasho-kusheegtan qiilka looga dhiganayo in Villa Muqdisho la isugu xagxagto wax weynba ma aha sideedaba, asal ahaanteedna waa mid xaaraan maqdac ah oo laaluusheyn iyo musuqmaasuq baahsan kusaleysan. Ma aha wax dad iyo 100% muslim ah loo soodhoweeyo habayaraatee.
Haddii inqilaab Soomaaliya ka dhacayo wuxuu noqon doonaa mid ay dawlad goboleedyadu Xamar kaga talabaxayaan oo masiirkoodana uga tashanayaan. Meeshan dawlad iyo madax qaran oo inqilaabba u qalma ma joogaan.
Ma aha wax dad iyo dal 100% muslim ah loo soodhoweeyo habayaraatee.
Hadda ka hor baa Shaydhaan la Ceejiyay Markaasuu Qoofal Dhalay (waa Caws madaxa ku leh qodxaan dadka dhibta, Dharkana ku dheg dhegta.)
Mar Labaad baa La Ceejiya oo Gaxar Buu dhalay.(Gaxar waa waa miro ka baxa cagaarka dhasha Roobka mid ka mida) Miruhu waxay leeyihiin Qodaxyo Dhankastaa kaga yaal oo markay Engegaan Dadka iyo Duunyadaba dhibateeyo, dhinackasta Qodax baa kaga taal.
Adigu Shaydhaan baad tahay, haddii lagu Waaniyo Xaarbaad dhashaa haddii lagu caayana hunqaad Dhashaa., ma lihid Dameer Xishooda iyo Dubaakh waansama,Weligeedna Wecelka iyo Sheegadku wayska Agdhawaayeen, Maah maahbaa ahayd Sheegad Dhalasho looma soo dhawaysto shiisheeyana laysagama dheereeyo.
Marqaannews baa kuu Noqotay meelaad ku hunqaacdo oo Wasakhda kugu jirto isaga keento, Kuna muujiso Fikirkaaga inaad maamul Beeleedyada aad Sheegato ku muujiso.
Illayn Sheegad Sheeko Xumo waa u Shacni.